သြဇာ, အများကြီးနဲ့ Margin - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာForex ကျောင်းစာအုပ်သြဇာ, စာရေးနှင့် Margin
သြဇာတစ်ဦးရဲ့ margin ကုန်သွယ်အချိုးအစားကိုကိုယ်စားပြု, နှင့် Forex ဒီတခါတရံအဖြစ်တာ 400 အဖြစ်, အလွန်မြင့်မားဖြစ်နိုင်သည်ရုံ $ 1 တစ်ဦးရဲ့ margin သိုက် $ 1000 တစ်ဦးအနေအထားအရွယ်အစားကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဆိုလိုတာက 400,000 ။
သငျသညျ 100 ပေးထားကြသည်မှန်လျှင်: 1 သြဇာအရစ်ကျအကောင့်, သင် $ 1000 (1000 ယူနစ်) နဲ့အသေးစားအကောင့်ခဲ့, သင်အနားသတ်အပေါ်စျေးကွက်သို့ကြောင့်အကောင့် $ 100 (100 ယူနစ်) ရိုက်ထည့်ပြီး $ 10,000 (10,000) ကုန်သွယ်မှုနိုင် ယူနစ်အနေအထား။ တိုင်း $ 1 အဘို့သင့်ပွဲစားက $ 99 စေရန်အခြား $ 100 ထပ်ပြောသည်အနားသတ်အပေါ်စျေးကွက်ထဲသို့သွင်းထား။ ဒါဟာသင်သာ $ 10,000 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနှင့်အတူရန်ပုံငွေအကောင့်တစ်ခုသုံးပြီး $ 100 တန်ဖိုးရှိ mini ကိုစာရေးတံရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်ဆိုလိုသည်။
သြဇာ 1: 100 ကုန်သွယ်ရေး၏တစ်ဦးချင်းစီ 1 များအတွက် 100 အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတက်ထားရန် client ကိုခွင့်ပြု: အထက်ဥပမာထဲမှာ, client ကို $ 100 နှင့်ကြွင်းသောအရာ ($ 9,900) စေတယ်အဆိုပါပွဲစားကနေလာပါတယ်။
သြဇာစာရေး၏တန်ဖိုးကိုမထိခိုက်ပါဘူး: တစ် mini ကိုအများကြီး 10,000 ယူနစ်သည်နှင့်တစ်ဦးစံအများကြီးမသက်ဆိုင်သည့်သြဇာ၏, 100,000 ယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစား, သြဇာသင့်အကောင့်အတွက်မြို့တော်အပေါ်အခြေခံပြီး, သင်ဈေးကွက်ထဲမှာရှိနိုင်ပါသည်စာရေး၏နံပါတ်တခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
သငျသညျကုန်သွယ်ပမာဏအပြည့်အဝသိုက်လိုအပ်ဘယ်မှာစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်, အမှမတူဘဲ Forex စျေးကွက်တစ်ခုသာအနားသတ်သိုက်လိုအပ်သည်။ ပမာဏ၏ကျန် (သင်ကသင်၏ပွဲစားကနေချေးပါလိမ့်မယ်) သင့်အကျိုးဆောင်များကခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ စတော့ရှယ်ယာကိုသင်အနားသတ်ပေါ်တွင်သင်၏ပွဲစားများထံမှချေးကြကုန်အံ့, ဒါပေမယ့်သာ2နှင့်အတူနိုင်သည် 1 သြဇာများနှင့်အနာဂတ် (30 မှတက်: 1) အများကြီး သာ. ကြီးမြတ်သြဇာပေးသနားတော်မူနိုင်ပေမယ်သိသိသာသာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လျော့ကျစေတဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စာချုပ်အရွယ်အစားနှင့်အတူ။
ကွဲပြားအများကြီးအရွယ်အစားကို အသုံးပြု. ၏ဆက်ပြောသည်ဆုကြေးငွေနှင့်အတူ: Forex ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေ (400 1 အထိ) သာ. ကြီးမြတ်သြဇာသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အားလုံးအရောင်းအစံ, mini ကို, မိုက်ခရိုသို့မဟုတ် nano သို့မဟုတ်တစ်ပြားအရွယ်အစားအဖြစ်တစ်ခါတစ်ရံအဖြစ်အနိမ့်ကနေတဆင့်ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအများကြီးအရွယ်အစားအလှည့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသော PIP တန်ဖိုးကိုတင်ဆက်သောအခြေခံငွေကြေး၏ယူနစ်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအတိုင်းအတာတွက်သည်။ အောက်တွင်ယူနစ်အတွက်တိုင်းတာတွေအများကြီးအရွယ်အစား, ခြေရင်းငွေကြေးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ (ဟောင်းရှိရာအဓိကအားလုံးအတှကျ volume ထဲမှာခြားနားချက်များကိုပြသနေတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဇယားသည်။ EURUSD သို့မဟုတ် GBPUSD) ။
လောတ Size ကို
1 နျ Standard လော 100,000 ယူနစ် 1.0 1 PIP = $ 10
1 Mini ကိုလောတ 10,000 ယူနစ် 0.1 1 PIP = $ 1
1 Micro နဲ့လောတ 1,000 ယူနစ် 0.01 1 PIP = $ 0.10
1 Nano လော 100 ယူနစ် 0.001 1 PIP = $ 0.01
အခြေစိုက်စခန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာမဟုတ်ပါဘူးအခါ, သငျသညျတခုအွန်လိုင်း PIP ဂဏန်းတွက်စက်ကိုသုံးနိုင်သည်ကွဲပြားနိုင်သည့် PIP တန်ဖိုးပိုမိုတိကျသောတွက်ချက်မှုသည်။
အောက်ကဇယားသည်သြဇာအမျိုးအစား, တဦးတည်းအများကြီးကိုဖွင့်ဖို့လိုအပျအနားသတ်အပေါ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့်တဦးတည်းတွေအများကြီး (စံ, mini ကို, မိုက်ခရိုနှင့် nano) ဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်သည်ရရှိလာတဲ့ဒေါ်လာစျေးငွေပမာဏကိုသရုပ်ဖော်:
အမျိုးမျိုးသောလောတအရွယ်အစားများအတွက်သြဇာ / Margin လိုအပ်ချက်ဇယား
အများကြီး ($ 100,000)
1 mini ကိုများအတွက်လိုအပ်သော
အများကြီး ($ 10,000)
$ ငွေပမာဏ (Margin)
အများကြီး ($ 1,000)
1 Nano များအတွက်လိုအပ်သော
အများကြီး ($ 100)
သင်သာတစ်ဦးချင်းစီ ($ 100) မိုက်ခရိုတွေအများကြီးများအတွက် $ 1 တက်ထားရန်လိုအပ်သည် 10 ရေးအတွက်ပွဲစား: သင်တစ်ဦး 1000 နဲ့အထက်ဇယားထဲကနေမြင်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာရုံ $ 200 ခဲ့လျှင်သင်ဒီတော့အလိုဆန္ဒသည်မှန်လျှင်, မိုက်ခရိုတွေအများကြီးရာထူး 20 မှတက်မှတက်ကုန်သွယ်မှုဖို့စွမ်းရည်ရှိသည်မယ်လို့ဆိုလိုသည်။
သို့သော်လောဘကြီး BE မနေပါနဲ့!
ဒါဟာသင်တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်စုစုပေါင်းအများကြီးရာထူး၌သင်တို့၏ချထားပေးအနားသတ်အချိုးပင် 10% ကုန်သွယ်မှုအကြံပြုသည်မဟုတ်။ စမတ်သြဇာကျနော်တို့မြင်ရကြလတံ့အဖြစ်,2၏လိုင်းများတွင်ပိုမိုဖြစ်ပါသည်: 1 သြဇာ, သို့မဟုတ်သင့်အခမဲ့အနားသတ်၏ 2% ။
သငျသညျ 1000 မှာ $ 100, တစ်မိုက်ခရိုအကောင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥပမာ,: 1 သြဇာများကိုသာသင်2အသေးစားစာရေး (2 သြဇာ, ဒါမှမဟုတ်အခမဲ့အနားသတ်၏ 1% 2) ကုန်သွယ်မှုလျှင်, အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အရောင်းနေရာ ( "အသုံးမပြုတဲ့သို့မဟုတ်မရရှိနိုင်ပါရဲ့ margin") 98% အခမဲ့သင်စွန့်ခွာလိမ့်မယ်။ တစ်ခုချင်းစီကို PIP 20 ဆင့် (2 အသေးစားအမြောက်အမြား X ကို 10 ဆင့်) ဖြင့်သင့်အကောင့်ပြောင်းလဲပစ်မယ်။ ထို့အပွငျကဖြစ်နိုင်တဦးတည်းကုန်သွယ်အပေါ်မပို2ထက်% အန္တာရာယ်မှကောင်းတစ်ဦးအုပ်ချုပ်မှုကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ 100 မိုက်ခရိုတွေအများကြီးကုန်သွယ်ရေးအပေါ်တစ်ဦး2PIP ရပ်တန့်အရှုံးချပြီးသင် 2% ($ 100 ၏ 20% ဖြစ်သော 20X2 ဆင့် = $ 1000) ဦးရေအများဆုံးအန္တာရာယ်မယ်လို့ဆိုလိုပေသည်။ ဒါဟာသင် Forex အတွက်ပုံမှန်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည့်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခု string ကို, ဆက်လက်ရှင်သန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
သြဇာကိုသင်အသုံးပြုနိုင်ပုံကိုပေါ် မူတည်. , သင့်မိတ်ဆွေသို့မဟုတ်ရန်သူရှိနိုင်ပါသည်။ သြဇာလျော့နည်းမြို့တော်နှင့်အတူကုန်သည်များသူတို့မဟုတ်ရင်ကုန်သွယ်မှုမဟုတ်နိုင်ကြောင်းစျေးကွက်များတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုတဲ့အကြီးအကုန်သွယ် tool ကိုတူသော်လည်းမည်သည့် tool ကို (က chainsaw စဉ်းစား) နဲ့တူ, သင်ကစနစ်တကျသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖို့ရှိသည်သို့မဟုတ်သင်အဖြတ်နိုင်ပါတယ် နှိမ့်ချ။
အဘယ်အရာကိုနောက်ထပ်သန်းတစ်ဦးကပွဲစားယဇ်တစ်ဦးကအဆင့်မြင့်သြဇာရွေးချယ်ခြင်း၏အလားအလာအန္တရာယ်များနှင့်ဆုကြေး Be မလား?
100: သြဇာနှင့် Forex ဆွေးနွေးခြင်းအများစုမှာဆောင်းပါးများကို 1 ထက် သာ. ကြီးမြတ်သြဇာအချိုးရာပူဇော်သက္ကာကိုအရစ်ကျကုမ္ပဏီများဆန့်ကျင်သတိပေးကြပါတယ်။ ဒီလိုသတိပေးချက်နောက်ကွယ်မှကဘာလဲ? ဒါဟာမကြာခဏပုံမှန်လက်လီ client ကိုအခွင့်အလမ်းပေးသောလျှင်, သြဇာအလားအလာထွက်သူကိုဖြစ်ကောင်း max ကိုမည်လောဘကြီးစကားမပြောနိုင်သောအန္ဓသောသွယ်ဝိုက်အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်သြဇာကြိုးနှင့်တူ၏, ထို client ကိုကလုံလောက်စွာပေးထားသောအခါ, ထိုပလ္လင်ပေါ်မှာမိမိကိုမိမိဆွဲထားတဲ့။ 400 ပွဲစားသူ့ကိုသူ၏ $ 1 အကောင့်အရွယ်အစားနှင့်အတူ 100,000 ယူနစ်ကုန်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်သူတစ်ဦးအမြန်အသေခံရန်သူ၏နည်းနည်းအကောင့် overleveraging, ထိုစရိတ်၏အားသာချက်ကြာ: သူကသူ့ 300 ကြောင်းရှုမြင်ပါသည်။
(ထို CFTC ၏လက်ရုံးကနေတဆင့်) ကို overprotective အမေရိကန်အစိုးရထိုနည်းတူပုံမှန် Client ကိုတစ်ဦးလောဘကြီးစကားမပြောနိုင်သောအန္ဓဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် 2010 ထဲမှာ 50 ဦးရေအများဆုံးသြဇာနှင့်အတူလိုက်လျောဖို့အားလုံးကိုအမေရိကန် brokerage အတင်းအကျပ်အားဖြင့်မိမိကိုမိမိအနေဖြင့် Forex ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုကာကွယ်ပေးရန်ပြုမူသည်ဟုထင်: 1, အောက်တိုဘာလ 2010 အတွက်အကျိုးသက်ရောက်သို့သှားသောစည်းကမ်း။ Patronizingly မလုံလောက်ခြင်း, CFTC 10 Forex ထဲက "လောင်းကစားသမား" ယူပေမယ့်အဆုံး၌ 1 ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်: 50 မှသြဇာကိုလျှော့ချဖို့လိုချင် 1 ဂျပန်၏သြဇာနှင့် ပတ်သက်. Forex နဲ့အညီပိုပြီး "ကျိုးကြောင်းဆီလျော်" နှင့်ပိုပြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ 2010 သို့မဟုတ် 100: 1 200 မပြုမီ, ကအမေရိကန်ပွဲစားများ 1 ၏သြဇာကိုကမ်းလှမ်းနိုင်ကြောင်းဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အခုဆိုရင်အမေရိကန် 50 မှသြဇာကန့်သတ်ရန်: 1 နှင့် ဂျပန် 25 မှသြဇာကန့်သတ်ရန်: 1 အများစုကအခြားနိုင်ငံများတွင်ပိုမိုမြင့်မားသြဇာရှိနေစဉ်။
ယေဘုယျအားငါကိုအမေရိကန်ကုန်သည်များ၏ရွေးချယ်မှုကန့်သတ်သည်အလွန်ဆိုးရွားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ကမ္ဘာ၏ကျန်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်မထင်ပါတယ်။ ယခင်ကအမေရိကန်လက်လီကုန်သည်များအတော်များများအဖြစ်အများအပြားကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ Forex ခံစားရန်ရေခြားမြေခြားကိုသူတို့အကောင့်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်အဆုံးသတ်ပါပြီ။ အမေရိကန်အောက်ပါမဟုတ်ပါသဖြင့်သူတို့အပိုဆောင်းဝင်ငွေအတွက်သန်းပေါင်းများစွာသော generate နိုငျသောအခါအဆိုပါ Brit သို့မဟုတ်စတေးလျသို့မဟုတ်ဆှစျ, ခြေအတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးဖို့ဒါမှမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အမေရိကန်သြဇာ၌ဤကန့်သတ်ဒါဟာ Self-ဖြောင့်မတ်, နာယကများနှင့်မလျော့မောက်မာဖြစ်ပါတယ်ကုန်သည်များကိုကူညီဘာမျှမပြု, များစွာသောကန့်သတ်မှု (ဥပမာ, non-ခြံစည်းမျဉ်း) ၏ဖွင့်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အမေရိကန်အတွက်ပိုပြီးဝင်ငွေဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်ရန် သာ. ပြု၏ 50 သြဇာပျမ်းမျှ Forex အတွက် "အလုံအလောက်ကောင်းသော" ဖြစ်ပါသည်: အမေရိကန်အစိုးရအားပြိုင်မှုများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ် 1 ကြောင်းစဉ်းစားရန် ကုန်သည်.
ဒီကိစ္စကို၏စစ်မှန်သောအမှန်တရားသူ့ဟာသူနှင့်မြင့်မားအရစ်ကျသြဇာအန္တရာယ်မပေးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Forex သြဇာစာရေး၏တန်ဖိုးမပြောင်းပါဘူး, နှင့်သင်ကွဲပြားခြားနားသောအများကြီးအရွယ်အစားကုန်သွယ်မှုရွေးချယ်စရာရှိသည်ကြောင့်သင်စာရေးတံအရွယ်အစားကိုပြောင်းလို့မရပါဘူးဘယ်မှာအနာဂတ်နှင့်အတူပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ကပိုပြီးသြဇာရှိသည်ဖို့သေချာပေါက်ပိုပြီးအန္တရာယ်များမဟုတ်ပါဘူး။ ပိုမိုမြင့်မားသောသြဇာပဲလျော့နည်းမြို့တော်နှင့်အတူပိုကြီးတဲ့စာရေး (သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုစာရေး) ကုန်သွယ်မှုနိုင်စွမ်းပေးအပ်။ သင်သာ $ 500 ခဲ့လြှငျ, ဥပမာ, သငျသညျ 400 နဲ့မိုက်ခရိုအကောင့်ဖွင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်သည် 1 သြဇာ, သငျသညျအသီးအသီးအဘို့ကိုသာ $ 20 အနားသတ်တွေနဲ့အသေးစားအမြောက်အမြား 2.5 အထိထိန်းချုပ်နိုင်အောင်။ သို့မဟုတ်, သင်ရုံတစ် $ 1 အနားသတ်တွေနဲ့ 2.5 မိုက်ခရိုတွေအများကြီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ သြဇာများနှင့်အများကြီးအရွယ်အစားသင့်ရဲ့နိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးကိုအသုံးပြုခြင်းအကြားမှာတော့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။
ငါသြဇာပိုမိုအလားအလာရှိခြင်းလောဘကုန်သည်များအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်သဘောတူပေမယ့်တိုင်းလောဘကြီး ကုန်သည် မိမိကိုမိမိဆွဲထားခြင်းနှင့်ဈေးကနေသူ့ကိုယ်သူဖယ်ရှားပစ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသင့်ပါတယ်။ တစ်လောဘကြီးနေလျှင် ကုန်သည် မိမိအ 1000 အတွက် $ 400 ရှိပါတယ်: 1 အသေးစားအကောင့်ခြင်း, မိမိကုန်သွယ်မှုများအတွက်အများဆုံးဖြစ်နိုင်သောသြဇာသုံးစွဲဖို့လိုလားသူ ($3တစ်အသုံး margin နှင့်အတူ) သည်သူ၏အကောင့်ပေါ် 750 စံအများကြီးဖွင့်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးအမြန်ရန်သူ၏လမ်းအလောင်းအစားနိုင်ပါတယ် အသေခံ။ သူ၏ရာထူးကိုဆန့်ကျင်တစ်ဦးကအလွန်သေးငယ်တဲ့ 30 PIP ပြောင်းရွှေ့သူ့ကို $ 900 (10 X ကို $ 10 PIP X ကို3နှုန်းစာရေး) ကုန်ကျမည်ဟု, သူသည်လိုအပ်သောမရှိတော့ဖူးလို့မှာသူအလိုအလျှောက်မိမိအ3စံစာရေးဖျက်သိမ်းပြီးမယ်လို့တစ်ဦးရဲ့ margin ခေါ်ဆိုခကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် သူတို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ margin ။
ထို့ကြောင့်ကမကြာခဏထပ်တလဲလဲသတိပေး၏မှတ်ချက်ကိုယူပြီးတန်ဖိုးရှိဖြစ်ပါသည်: HIGH သြဇာကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်များပြားလှသောအကျိုးအမြတ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ဟုတ်ကဲ့, အထူးသဖြင့်သူတို့ကိုရရှိနိုင်သောသြဇာ၏အလွန်အကျွံအသုံးပြုကြသောစကားမပြောနိုင်သော, လောဘကုန်သည်များသည်။
ကုန်သွယ်ရေးသြဇာ Per နည်းအတူထရေးဒင်းအဆင့်မြင့်သြဇာပိုင်ခွင့်သီးသန့်ဖယ်ထားပေမယ့်
ငါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သြဇာနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စာရေးအပ်နှင်း sizing ကြောင်းယုံကြည် Forex အများဆုံးကုန်သည်များထိတ်သို့မဟုတ်အနာဂတ်တစ်ခုခုကိုထက်ဝေးပိုလုံခြုံကုန်သွယ်နယ်ပယ်တွင်ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအနာဂတ် ကုန်သည် အတော်လေးမြင့်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည့်သတ်မှတ်ထားတဲ့စာချုပ်များအတွက်ရည်ရွယ်သည့်သြဇာအသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးက Forex ကုန်သည်ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချစွာသူ့အကောင့်အရွယ်အစားအချိုးအစားအတွက်စာရေးခြင်းနှင့်သြဇာရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်။ ဥပမာ, $ 1000 တစ်ခုဖွင့်လှစ်အကောင့်လုံခြုံစတင်ကုန်သွယ်မှုအရွယ်အစားဖြစ်ကောင်းထိရောက်စွာသုညသြဇာသုံးပြီးမည်ဖြစ်ကြောင်းရသောတစ်မိုက်ခရိုတွေအများကြီးပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်သူတစ်ဦး 100 PIP ပြောင်းရွှေ့သူ့အကောင့်အရောက်တွင်စိုးရိမ်ရန်ရှိသည်မှာမဟုတ်ဘူး; အစားသူ့ကိုဆန့်ကျင် 100 pips သာသူ့ကို $ 10 (သို့မဟုတ်မိမိအအကောင့် 1%) ကုန်ကျမည်ဟု, သူသည်အရောင်းအဆုံးရှုံးနေတဲ့အရေအတွက်ကထွက်စီးနိုင်ဘူး။
ထိုကဲ့သို့သော ကုန်သည် အမျိုးမျိုး, အခွင့်အလမ်းသို့မဟုတ်အရေးပေါ်အဘို့အ 200 သြဇာ: ထို့နောက်အလားအလာ 1 ကြိုတင်ယူထားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအသီးအသီးကူးကြကုန်အံ့။ အမျိုးမျိုးအားဖြင့်, ငါကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောမဟာဗျူဟာ employ ကြောင်းတစ်ပြိုင်တည်းပါအရောင်းအရှိသည်ဖို့အလားအလာဆိုလို။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်ဖန်တီးထားသောသို့မဟုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပြန်နှင့်ရှေ့ဆက်စမ်းသပ်၌ကြီးသောရလဒ်များကိုရှိသည်ခြောက်လကွဲပြားကွက်, သင်တစ်ဦးချင်းစီကိုအခမဲ့အနားသတ်၏ 2% သုံးပြီးအားလုံးခြောက်လကွက်ကုန်သွယ်မှုနိုင်စွမ်းရှိသည်ဖို့ချင်တယ်။ အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်, သင်တို့ကိုငါအံ့သြဖွယ်အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်သငျသညျ သာ. ကွီးမွတျသြဇာသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုရာထူးနှင့်အတူကအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်ချင်သည့်အခါစျေးကွက်အတွက်ကြိမ်ရှိစေခြင်းငှါဆိုလို။ သင်အလေးသာသင့်ရဲ့မျက်နှာသာ၌အလွန်ဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သင်အသုံးပြုဘို့, သြဇာရှိတယျ။ သငျသညျကြီးတွေနဲ့ Hard ဒဏ်ခတ်ဖို့အလားအလာရှိသည်။
ထိုအခါဆင်းရဲဒုက္ခ၏အမှုများရှိပါသည်။ သငျသညျအရောင်းအဆုံးရှုံးကြီးမားစီးရီးခံစားခဲ့ကြရသည်, သင်၏အကောင့်က၎င်း၏ကနဦး $ 500 (1000% အရှုံး) မှ $ 50 ချသည်ကောင်းစွာထိုအမှု၌သင်တို့ကိုဆဲအပေါက်မှထွက်သငျသညျအရ 0.01 အများကြီးအရွယ်အစားသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့သြဇာ, ကြားဖြတ်အစိုးရစိုက်ပျိုးထားပြီးအခုသင်သာ $ 0.01 အခါ 1000 အများကြီးအရွယ်အစားကိုထိရောက်စွာ $ 500 ကိုထိန်းချုပ်ထားနေသောကြောင့် (သင်ယခု2တစ်သြဇာကိုအသုံးပြုနေသည်: သင်၏အကောင့်အရွယ်အစား 1 သက်ဆိုင်ရာ) ။ တကယ်တော့ကြောင့် 200 ၏: 1 သြဇာအလားအလာ, သင့်ရဲ့အကောင့်ကို $ 100 (သင့်ကနဦး၏ 90%) အောက်သို့ကျဆင်းနိုင်ပြီး, သငျသညျဆဲအပေါက်ကိုသင်ထွက်ရရန်ကြိုးစားရန် 0.01 အများကြီးအရွယ်အစားကို အသုံးပြု. နိုင်ပါသည်။ သာ. သြဇာစွမ်းရည်အရှင်သင်သည်သင်၏ account ကိုပေါက်အဖြစ်သင့်ကနဦးတွေအများကြီးဆိုက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ခွင့်ပြုထားသည်။ သင့်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာရှိသမျှရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းချသင့်ရဲ့မဲနှိုက်ထဲကသင့်ရဲ့လမ်းကိုတက်ဖို့ကပိုခက်နှင့်ကြာကြာလုပ်လိမ့်မည်ဟုအရာ, သေးငယ်နှင့်သေးငယ်စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးများ 100 ပိတ်ပင်တားဆီးမှုရှယ်ယာရောင်းဝယ်ဖောက်ရန်သင့်အားအတင်းမယ်လို့ဘယ်မှာစတော့ရှယ်ယာ, ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
အဆုံး၌, သင့်အရစ်ကျသြဇာသင့်ရဲ့အများဆုံးအလားအလာသြဇာဆုံးဖြတ်သည်, ထိုသို့အမျိုးမျိုး, အခွင့်အလမ်းနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခ၏ပြဇာတ်အဘို့အရာကြွင်းလေသမျှသီးသန့်ဖယ်ထား, က၏အသေးငယ်ဆုံးဒီဂရီကုန်သွယ်မှုသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
margin, တပတ်ရစ် margin ပြီးတော့အခမဲ့ margin
ဆောင်းပါး၏အစအဦး၌ငါ $ 1000 အကောင့်နဲ့တစ်ဦးကို client (ကနဦးချိန်ခွင်လျှာ) $ 1 တစ်ခုလည်ပတ်တန်ဖိုးရှိသည့် EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏ 10,000 mini ကိုအများကြီးဝယ်ယူဘယ်လိုသရုပ်ဖော်။ client ကိုစိတ်ထင် 100 တစ်သြဇာရှိပါတယ်: တစ်ခုကိုအကောင့် 1, ထို့နောက်ကြောင်း 1 mini ကိုအများကြီးကုန်သွယ်မှုနိုင်ရန်အတွက်သူသည်မိမိအကောင့်ကနေ $ 100 ယူမယ်လို့နှင့်ပွဲစားကနေ $ 9,900 ချေး။ သူသညျမိမိအကောင့်ထဲကနေယူငွေကို ($ 100) ကဖြစ်ပါတယ် အနားသတ် or အသုံးအနားသတ်, သောပွင့်လင်းကုန်သွယ်မှုအနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့အသုံးပြုနေပါသည်။ ကုန်သွယ်ခံသည်မဟုတ်မိမိအကောင့်ထဲမှာ $ 900 ယခုရှိပါသည်။ အခြားကုန်သွယ်မှုစေရန်အဆိုပါစွမ်းရည်ကလက်ရှိအသုံးပြုအနားသတ်အရေအတွက်ကိုနုတ်သောအနေဖြင့်ရှယ်ယာတန်ဖိုးဖြစ်သောအခမဲ့ margin ကဆုံးဖြတ်သည်။
margin သို့မဟုတ်တပတ်ရစ် margin
လက်ရှိပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာတွင်အသုံးပြုကြောင်းသင့်အကောင့်ထဲမှာပိုက်ဆံပမာဏကို။ သငျသညျ 100 ရှိပါက: 1 အရစ်ကျ, သင် 1 mini ကိုအများကြီးဖွင့်လှစ်ပြီ, ထို့နောက်သင့်ကိုအသုံးပြုအနားသတ် $ 100 ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောလောတအရွယ်အစားများအတွက်သြဇာ / Margin လိုအပ်ချက်စားပွဲတင်: အထက်တွင်စားပွဲပေါ်မှာကြည့်ရှုပါ။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကိုပိုမိုတိကျစွာသည်ဖော်မြူလာသည်:
တပတ်ရစ် Margin = (အရံ Market က Quote * အများကြီး) / သြဇာ
(200 ၏ဥပမာ: 1 EURUSD မှာ 1 mini ကိုအများကြီးအဘို့အ 1.2700 ပွဲစား:
သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်မှုဖွင့်လှစ် & ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက်, သင် account တစ်ခုပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ရှယ်ယာအနည်းဆုံး $ 63.50 ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာပိုက်ဆံပမာဏကိုအနုတ်အဆိုပါအနားသတ် (သို့မဟုတ်အသုံး Margin) ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏အကောင့်ထဲမှာ $ 1000 ရှိသည်နှင့် အကယ်. $ 1 တစ်ဦးရဲ့ margin လိုအပ်သည် 100 mini ကိုအများကြီးဖွင့်လို့ရပြီ, ထို့နောက်သင့်ရဲ့အခမဲ့အနားသတ် $ 900 ဖြစ်ပါတယ်။
အခမဲ့ Margin = Equity - Margin (သို့မဟုတ်တပတ်ရစ် Margin)
(ဥပမာ: $ 1000 - $ 100 = $ 900 အခမဲ့ margin)
အောက်တွင် Margin တစ် MT4 စခရင်ပုံဖြစ်ပါသည် အခမဲ့ Margin နှင့် margin အဆင့် (Terminal window အတွက်):
ကျနော်တို့ပြီးသားအဘယ်အရာကို Margin ကိုဆှေးနှေးခဲ့ကြပြီး အခမဲ့ Margin ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ပါ 400 ခုနှစ်တွင်: $ 1 ၏ 1399 FXPro အကောင့်ကျနော်တို့ $ 25 margin သုံးပြီးသော mini ကိုအများကြီးထွက်ကိုယူ။ ဒါက $ 1371 နောက်ထပ်အရောင်းအဘို့အကြှနျုပျကိုရရှိနိုင်အခမဲ့အနားသတ်ထွက်ခွာမည်။ ok ဖြစ်လျှင်, Margin အဆင့် (5504% ကြောင်းကားအဘယ်သို့) ကဘာလဲ?
margin အဆင့် ရာခိုင်နှုန်း:
margin အဆင့်ရာခိုင်နှုန်း = (Equity / margin) X ကို 100
အထက်ပါပုံရိပ်မှာ, ငါ့ရှယ်ယာ 1397 ညီမျှနှင့် 25 အားဖြင့်ပွားများ 55 ဖွငျ့ခှဲခွား $ 100 ဖြစ်ပါသည်, ငါ 5504% အနားသတ်အဆင့်ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ ဒီအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ? ဒါဟာအထူးသဖြင့်သင်သည် 100% အနားသတ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိဖြစ်ကြောင်းဘယ်လိုနီးစပ်, တခါများစွာသောပွဲစားများများအတွက်ရောက်ရှိသောပုံမှန်အဆင့်ကိုတစ်ဦးရဲ့ margin ခေါ်ဆိုခဖျက်သိမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်လာစေမည်, သင်အနားသတ်သင့်ရဲ့အဆင့်ကိုတစ်ဦးအမြန်အမြင်အာရုံကိုပေးသည်။ အထက်ပါစခရင်ပုံဖြိုဖျက်ကျွန်တော်တို့ကိုစို့:
အခမဲ့ margin: 1371.93
margin အဆငျ့: 5504.38%
ငါ $ 25 margin သုံးပြီးနေပါတယ်။ အဆိုပါရှယ်ယာ $ 100 (25% အနားသတ်အဆင့်) ကိုအောက်တွင်ကျရောက်သည့်အခါတစ်ဦး 100% Margin ခေါ်ရန်ပွဲစားဘို့, ငါရဲ့ margin ခေါ်ဆိုခဖျက်သိမ်းမှုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
တစ်ဦးက Margin ခေါ်ရန်ဆိုတာဘာလဲ
ကုန်သွယ်ထိတ်, အနာဂတ်သို့မဟုတ် Forex ဖွစျစေ, အားလုံးကုန်သည်များကွောအနားသတ်ခေါ်ဆိုခကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
margin ခေါ်ရန်: တစ်ဦးသင့်အကောင့်% အတွက်လိုအပ်တဲ့အနားသတ်အတိတ်ချော်သောပွဲစားကနေသတိပေးနှင့်လုံလောက်အောင်ရှယ်ယာ (floating အမြတ်အစွန်း - floating ဆုံးရှုံးမှု + အသုံးမပြုတဲ့ချိန်ခွင်လျှာ) မျှမရှိကြောင်းမဆိုထပ်မံသင့်ရဲ့ပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကိုထောကျပံ့ဖို့အကောင့်ပေါ်မှာ။
view ၏အကျိုးဆောင်ရဲ့အချက်အနေဖြင့်, ကသူတို့ margin နဲ့သြဇာကနေတဆင့်သင်ခွင့်ရခဲ့သောပိုက်ဆံဆုံးရှုံးမှမိမိတို့ကိုကာကွယ်သူတို့ရဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တွင် Forex ဒါကြောင့်စတော့ရှယ်ယာနှင့်အနာဂတ်နှင့်အတူရှိသကဲ့သို့, ပိုပြီးရန်ပုံငွေများကိုထည့်သွင်းရန်သင့်ပွဲစားကနေဖုန်းခေါ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ အကောင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအနားသတ် (1000 100 တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါတစ်ဦးစံတွေအများကြီးဥပမာတစ်ခုအနေအထား, $ 1 ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်မြို့တော်) ကိုအောက်တွင်ကျရောက်သည့်အခါမယ့်အစား, ကများသောအားဖြင့်သင့်ရဲ့ရာထူးတစ်ခုအလိုအလျောက်အပြည့်အဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖျက်သိမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ အထက်စားပွဲကိုကြည့်ပါ။ မဆိုအထူးသဖြင့်ကုန်သွယ်ရေး, သင်အန္တရာယ်မှာရှိသည်ပိုပြီးအန္တရာယ်မြို့တော်နှင့်တစ်ဦးရဲ့ margin ခေါ်ဆိုခများ၏ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေမှာအသုံးပွုတဲ့သြဇာ သာ. ။
သငျသညျအပြည့်အဝကိုမည်သို့သင့်ရဲ့အနားသတ်အကျင့်ကိုကျင့်နားလည်ပြီး, သင်နှင့်သင့်ပွဲစားအကြားအနားသတ်သဘောတူညီချက်ဖတ်ရှုဖို့သေချာဖြစ်သင့်သည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အသုံးပြု Margin တခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ရန်အမြဲအကောင်းတစ်စိတ်ကူးသည်နှင့် အခမဲ့ Margin သငျသညျလွန်း margin သုံးပြီးနှငျ့သငျအခမဲ့အနားသတ်လက်ဝဲများများရှိသည်မဟုတ်သေချာစေရန်။
အဆိုပါပွဲစားကပြောပါတယ်လိုက်တဲ့အခါ: Margin ခေါ်ရန်အဆင့် = 100% ။
ဤသည် Margin အဆင့် 100% ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်ကသင့်ရဲ့ရှယ်ယာသင့်ရဲ့အသုံးပြုသောအနားသတ်ညီမျှအခါ, သင်တစ်ဦးရဲ့ margin ခေါ်ဆိုခ liquidtion (ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီးမေးလျသတိပေးအတူရှေ့မ) ရမည်ဟုဆိုလိုသည်, ကြောင်းကိုသင်၏အနားသတ်အဆင့် 100% အခါဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ရာထူး (အနိမ့်ဆုံးအနားသတ်လိုအပ်ချက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သည်အထိအနည်းဆုံးအမြတ်အစွန်းအနေဖြင့်စတင်တဦးတည်းအားဖြင့်များသောအားဖြင့်တဦးတည်း) ထွက်ပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မည်မကြာခင်မှာပဲ။ တစ်ဦး 100% အနားသတ်လိုအပ်ချက်ရဲ့ margin ခေါ်ဆိုခတစ်အန္တရာယ်အများကြီးပိုနီးစပ်စေသည်စဉ်တွင်ထပ်မံဆုံးရှုံးမှုသင့်ရဲ့ရှပ်အင်္ကျီဆုံးရှုံးထံမှသင်တို့တားဆီးသဖြင့်မလွှဲမရှောင်ကြသောအခါ, ကပိုပြီးပိုက်ဆံကယ်တင်ပါဘူး။ သင်တစ်ဦးအစွန်းရောက်ဆိုးရွားသောစျေးကွက်အပြောင်းအရွေ့အတွက်အကောင့်ထဲမှာကျန်ရစ်မှာအနည်းဆုံးအချို့ပိုက်ဆံရှိသည်။
အဆိုပါပွဲစားကပြောပါတယ်လိုက်တဲ့အခါ: Margin ခေါ်ရန်အဆင့် = 50% ။
ဤသည်ပွဲစားကအနားသတ်ကန့်သတ်သင့်ရဲ့အလွဲသုံးစားမှုကိုင်တွယ်ပုံကိုမှအဖြစ်အလွန်ရက်ရောဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကသာသင့်ရဲ့အနားသတ်အဆင့်နှိမ့်ချ 50% အထိသွားသည့်အခါသင့်ရဲ့ရှယ်ယာ, သောကွောငျ့ဖွစျသညျတဝက်သင့်ရဲ့အသုံးပြုသောအနားသတ်ညီမျှသည့်အခါသင့်အကောင့် liquidating စတင်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါပွဲစားကပြောပါတယ်လိုက်တဲ့အခါ: Margin ခေါ်ရန်အဆင့် 70%, 30% ထုတ်ရပ်တန့်
ဤသည်ပွဲစားအပိုရက်ရောဖြစ်ခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးမျှတသောသတိပေးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအနားသတ်ခေါ်ဆိုခသတိပေးသင့်ရဲ့အနားသတ်အဆင့်နှိမ့်ချ 70% အထိသွားသည့်အခါစတင်နှင့်သင့်ရဲ့ margin အဆင့်နှိမ့်ချ 30% အထိသွားသည့်အခါတစ်ဦးဖျက်သိမ်းမှုဖြစ်ပေါ်သည်။ သင့်ရဲ့အနားသတ်ခေါ်ဆိုခအဆင့်အထိထိုအနိမ့်အဆင့်မသတ်မှတ်ရှိခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးရဲ့ margin ခေါ်ဆိုခရှိခြင်းသင့်ရဲ့စွန့်စားမှု (သင်ဇယားကွက်သို့မဟုတ် martingale စနစ်များနှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျှင်ကောင်းသောဖြစ်နိုင်သည့်) ဝေးကွာတွန်းနေကြသည်။ သငျသညျအလုံအလောက်သတိထားမဟုတ်လျှင်စျေးကွက်သင်တို့တဘက်၌ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုံ့ဆော်ပေးလျှင်သို့သော်ဤပိုပြီးရက်ရောသောအနားသတ်ခေါ်ဆိုခပွဲစားများသင့်အကောင့်အတွက်အလွန်နည်းနည်းလက်ဝဲဖြင့်သင်တို့ကိုစွန့်ခွာနိုင်ပါတယ်။
အောက်တွင်တစ်ဦး 100% Margin ခေါ်ရန်အဆင့်ပွဲစားနှင့်အတူ margin ခေါ်ဆိုခ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဂျက်ဖ် 1000 မှာ $ 100 နဲ့မိုက်ခရိုအကောင့်ဖွင့်လှစ်: 1 သြဇာ။ သူ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး4၏စျေးနှုန်းမှာယူရို / အမေရိကန်ဒေါ်လာအပေါ် 1.3200 mini ကိုစာရေးဝင်တိုသွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ [(Market က Quote * အများကြီး) / သြဇာ] အထက်ပါအနားသတ်ပုံသေနည်းအရ, က Jeff $ 520 အနားသတ် ((1.3200 * 40000) / 100) ကို အသုံးပြု. မည်ဖြစ်သည်။ ဝင်ရောက်မီ, က Jeff ရဲ့အခမဲ့အနားသတ် $ 1000 ကြီးနှင့်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်, သူ့အခမဲ့အနားသတ် $ 480 ($ 1000- $ 520) ဖြစ်ပါသည် .Disaster သပိတ်နှင့်ဂျက်ဖ်ရဲ့အရောင်းသူ့ကိုဆန့်ကျင် go: EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ 100 pips ထခုန်များနှင့်တိုင်း PIP ကတည်းကအတူ4mini ကိုစာရေးတံသည်သူ၏ရှယ်ယာ $4(400-150) ရောက်ရှိဖို့ $4(600X $ 1000) ဆင်းကို drop, $ 400 ညီမျှ။ အခုတော့ဂျက်ဖ်ကသူ့မြင် margin အဆင့် မိမိအ 115% max ကိုအနားသတ်အဆင့်အထိအန္တရာယ်နီးကပ်, (Equity / Margin = $ 600 / $ 520) 100% ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချက်မှာမိမိရဲ့ margin bar ကိုသတိပေးအဖြစ်အနီရောင်လှည့်လိုက်ပါတယ်။ အခါ EURUSD သူ့အကောင့်ရှယ်ယာ $ 25 ရောက်ရှိဖို့ $ 100 (25X $ 4) ချပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်နောက်ထပ် 500 pips ထခုန်။ ယခုသူ 100% max ကိုအနားသတ်အဆငျ့ကိုအောက်တွင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးစနစ်အလိုအလျှောက်ပိုပွီး margin.When အရာပွဲစားများ၏အနားသတ်မူဝါဒအပေါ်မူတည်ပြီးအရာအတော်များများဖြစ်ပျက်နိုငျသညျ, အနီးကပ်% 100 ရ recover လုပ်ဖို့ဆုံးရှုံးမှုမှာအရောင်းအပိတ်။ တချို့ကပွဲစားများ 100% မှာအရည်ရာထူးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲစားများ၏အနားသတ်မူဝါဒအပေါ် မူတည်. , သူ့ရာထူးလုံးဝသို့မဟုတ်တစိတ်တပိုင်း liquidated ပြီနိုင်ဘူး။ ဂျက်ဖ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖျက်သိမ်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့သူ့ရဲ့ပွဲစားနဲ့ 100% အနားသတ်ခေါ်ဆိုခအဆင့်ကိုရေးမူဝါဒရှိပါတယ်စဉ်ကတည်းကပင်သူ၏ပွဲစား Auto-Liquid ရာထူးမှစတင်သည်ပြန် 100% အနားသတ်ခေါ်ဆိုခမျက်နှာပြင်အထက်ကသူ့အကောင့်ရွေ့လျားမှီတိုင်အောင် (အကြီးဆုံးပထမဦးဆုံးရှုံး) ။ ပထမတော့သူသည်မိမိအလေးရာထူးများထဲမှ 125 မှာထွက်ရပ်တန့်စေခြင်းတွေ့မြင်စေခြင်းငှါ,% 390 ရန်သူ၏အနားသတ်အဆင့်ကို reset လုပ်တယ်သော (က $ 500 ရှယ်ယာများအတွက်) $ 128 ဆင်းသည်သူ၏အနားသတ်လိုအပ်ချက်လျှော့ချ, အရှုံး pips ။
စျေးကွက်တစ်ခုအပိုဆောင်း 25 pips အားဖြင့်ကျရောက်လျှင်မူကား, သူသည်မိမိအကောင့် $ 75 ပြန် 25% max ကိုအဆင့်အောက်သူ့ကိုတွန်းထားတဲ့ရှယ်ယာမှ $3(375x $ 100) ကဆင်းကိုမြင်ရလိမ့်မယ်, သူသည်တစ်စက္ကန့်ကိုဆုံးရှုံးတက်အဆုံးသတ်မယ်လို့ 150 မှာအနေအထားဆုံးရှုံးမှု pips ။ ဤသည်အလှည့်ကျ $ 260 ရန်သူ၏အနားသတ်လိုအပ်ချက်ကိုလျှော့ချမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် $ 375 ရှယ်ယာနှင့်အတူ, သူ့ရဲ့ margin အဆင့်% 144 မှပြန်လည်သတ်မှတ်မှုပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ထို့နောက်သူသည်သူ၏မူလများ၏ 60% ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းကိုမြင်လျှင်, Jeff ကမလျော့ဘူးလို့ပြောထားတယ်ခေါ်ပါမယ်လို့နှင့် $ 150 တစ်ခမ်းနားစုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုများအတွက်, -625 pips ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဦးကိုရာထူးတစ်ဦးချင်းစီမှထွက်ကိုပိတ်ပါ။
ညံ့ဖျင်းသောက Jeff သူသိပ်သြဇာ၏အားသာချက်ကို ယူ. ဒုက္ခသည်ကိုယ်တော်တိုင်တယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့, Jeff သာ2နှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့သင့်တယ်မိမိ $ 1 အကောင့်2အသေးစားအမြောက်အမြားဖြစ်ရပြီလို 1000 သြဇာ, (2 အသေးစားအမြောက်အမြား = $ 2000) ။ ထို့နောက်သူ့ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ 150 ဆိုးရွားသောအပြောင်းအရွေ့သူ့ကိုသာ $ 30 (150X $ 0.20), သူ့အကောင့်ကသာ 3% ၏ဆုံးရှုံးမှုကုန်ကျပါလိမ့်မည်။ ဂျက်ဖ်ထို့နောက်အခြားသောနေ့ရက်ကိုစစ်တိုက်ခြင်းငှါတတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Margin ခေါ်ဆိုမှုများ & Stop တနေရာကိုရှောင်ရှားပါရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
စမတ်သြဇာကိုသုံးပါ။2ထက်ပိုမိုရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့မကြိုးစားပါ: တစုံတယောက်သောသူသည်အချိန်တွင် 1 သြဇာ။
သင့်ရဲ့အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ သင့်အကောင့်ထက်ပို 3% ဆိုတစုံတယောက်သောသူသည်ကုန်သွယ်မှုအန္တာရာယ်မှမကြိုးစားပါ။
နောက်ဆုံးတွင်အနားသတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုထိရောက်စွာသင့်ရဲ့အရောင်းအလုပ်မရရှိနိုင်ပါသြဇာထက်ဝေးလျော့နည်းသုံးပြီးနှင့်ပုံမှန်အကောင့်ချိန်ခွင်လျှာစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာမကြာခဏတဦးတည်းစွန့်စားမှုကန့်သတ်သောအနေအထားအပေါ်ရပ်တန့်-အမိန့်ကိုသုံးပါသင့်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ပြီး, ဤလုပ်နိုင်တဲ့အထောက်အကူဖြစ်စေ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုချိန်ခွင်လျှာဖို့သြဇာအရွယ်အစားအနိမ့်ဆွေမျိုးစောင့်ရှောက်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာပါပဲ။ သင့်အနေ၌ဤအပေါ်ပိုမိုဖတျရှုနိုငျပါသညျ ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်း။
Margin ခေါ်ဆိုမှုများ & Stop တနေရာကိုရှောင်ရှားဖို့ကိုဘယ်လို
margin အသုံးပြု margin နှင့်အခမဲ့ margin
ကုန်သွယ်ရေးသြဇာ Per နည်းအတူထရေးဒင်းအဆင့်မြင့်သြဇာဖို့ညာသီးသန့်ဖယ်ထားစဉ်
တစ်ဦးရဲ့ margin ခေါ်ဆိုခကဘာလဲ
"| ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ FX စက်ရုပ်" ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဤအန္တရာယ်များကိုအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်သည်သင်၏ဆု�